Nairobi (Dawan/Daily Nation)- Ganacsatada Jaadka ee Kenya, ayaa lacag ka helay Somaliland oo ay ka dhacday Jaad yaraan ay sababtay rebshadihii u dhexeeyay degaannada Soomaalida iyo Oromada ee waddanka Itoobiya oo xanibtay Jaadkii uga iman jiray Itoobiya.
Sida uu daabacay shalay Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi, waxaana warkan soo turjumay Tifaftiraha Guud ee Wargeyska Dawan, Cumar Maxamed Faarax:-
“Ganacsatada Jaadka Mirooga ee dalka Kenya, ayaa lacag iyo suuq ka helay jaad yaraanta soo wajahday Somaliland, kadib markii rebashado dhex mareen degaannada Oromada iyo Soomaalida dalka Itoobiya.
Itoobiya ayaa Jaadka ugu badan gaysa magaaladda Hargeysa ee Somaliland iyo Djibouti, hase ahaatee rebshadihii u dambeeyay ee qowmiyadaha ku salaysnaa, ayaa sababay inuu istaago gaadiidkii Jaadka geyn jiray magaalooyinkaas.
Jaadka ugu badan ee Itoobiya waxa uu ka baxaa bariga dalkaas, gaar ahaan gobollada Dire Dawa iyo Harar oo labaduba qiyaastii Hargeysa u jira 200km.
Siday baahisay Jimcihii toddobaadkii hore Idaacadda BBC-du dad badan ayaa ku dhintay, qaar kalena way ku barakaceen iska horimaadyada degaannada Soomaalida iyo Oromada, iyadoo warbaahinta maxaliga ahina werisay in qulqulatooyinkaasi saameeyeen ganacsigii bariga Itoobiya.
Afhayeenka Ururka ganacsatada Jaadka Miirooga, Kimathi Munjuri oo la hadlay Daily Nation, ayaa sheegay inay illaa toddobaadkii hore 12 ton oo Jaad ah geeyeen Hargeysa.
Waxa kale oo uu intaas ku daray in ay suuqaas galeen markii ganacsatada iyo dadka Jaadka cunaa ay ka qayliyeen Jaad yaraanta soo foodsaartay iyo iibkiisii oo qaaliyoobay.
Jaadku waa qayb weyn oo ka mid ah cashuurta soo gasha Somaliland, waxaanu Boqolkiiba Labaatan (20%) ka noqday miisaaniyadii dawladda ee sannadkii 2014-kii oo ay uga soo xarootay 15 Bilyan oo Shilin.
Waxa la sheegay in Somaliland ay lacag ka badan 54 Bilyan oo shilin sannadkii Itoobiya kaga soo iibsato Jaadka.
Sannadkii 2016-kii Badhasaabkii hore ee gobolka Meru, Peter Munya, ayaa booqday Hargeysa si uu suuq ugu soo helo qaadka Mirooga, hase ahaatee safarkiisii wuxuu isu beddelay oo uu dhaliyay muran.
Mr. Munya wuxuu xiligaas xukuumadda Somaliland ku guubaabiyay inay meesha ka saarto caqabadaha hor taagan in qaadka gobolkiisa loo iibkeeno Hargeysa.
Somaliland waxay ka go’day Soomaaliya sannadkii 1991kii, waxaanay xuduud la leedahay Jabuuti oo ay soohdin kala wadaagto galbeed, Itoobiyana waxay xad ka wadaagaan dhinaca koonfurta. Sidoo kale waxay Soomaaliya xad kala leedahay bariga. Somaliland wali looma aqoonsan dal madax-bannaan.